Manohana ara-kevitra sy mizara traikefa mandavan-taona izahay - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
www.lakroa.mg- Mankalaza ny Fetim-pirenena ny Vahoaka Malagasy. Mandray anjara amin’izany ve ny orinasa La Gastronomie Pizza ?
LR- Eny Tompoko, tahaka ny orinasa malagasy rehetra dia miaraka mankalaza amin’ny vahoaka Malagasy tsivakivolo ny Fetim-pirenena ny orinasa La Gastronomie Pizza. Azo lazaina hoe mampifety ny olona aza izy amin’ny alalan’ny fanolorana vokatra sy servisy mifanaraka amin’izany Fety lehibe izany.
www.lakroa.mg- Tahaka ny ahoana ny endrik’izany fandraisana anjara izany ?
LR-Manararaotra ny fisian’ny Fety iray ny La Gastronomie Pizza ka mamorona vokatra mifanandrify amin’izany ho an’ireo mpanjifany. Amin’izao fankalazana ny faha 55 taona nahazoana ny Fahaleovantena izao dia manolotra ny Pizza Asaramanitra GM sy PM izahay ho an’ireo mpanjifanay
www.lakroa.mg- Ahoana no ahitana fa izany pizza izany dia natokana ho pizza fetim-pirenena ?
LR-Asehonay amin’ny endrika manakaiky ny lokon’ny sainam-pirenena izay manamarika ny fiandrianam-pirenena malagasy izany pizza izany. Marihina fa akora avy eto an-toerana daholo no nanaovana azy
www.lakroa.mg- Raha mihaino ny dokam-barotra dia tapitra ny 26 juin ny famarotana io pizza io ? Izay tokoa ve ? Nahoana kanefa andro tsy hiasana ny 27 sy 28 mbola mety ho liana
ny mpanjifa hafa, indrindra ireo tsy afaka nandalo ny 26 juin ?
LR- Nanomboka ny Alatsinainy 22 Jiona ka hifarana ny Alahady 28 Jiona io tolotra io izay hita eny amin’ireo toeram-pivarotana miisa 24 misy manerana ny Nosy
www.lakroa.mg- Misy fanomezana ve ao anatin’ilay pizza ? toy ny pin’s sainam-pirenena na endrika hafa ?
LR- Azo lazaina fa fihenam-bidy no natolotray ho an’ny mpanjifa satria bebe kokoa ny vidin’ny akora sy ny fandaniana nefa tsy nakarina ny vidiny ho fanomezana fahafaham-po ny mpanjifa. 10 000 Ar ho an’ny Pizza Asaramanitra PM ary 14 000 Ar kosa ho an’ny Pizza Asaramanitra GM
www.lakroa.mg- Manerana an’i Madagasikara ve io tolotra io sa eto Antananarivo ihany ?
LR- Ny tolotra rehetra izay omen’ny La Gastronomie Pizza dia kendrenay mandrakariva mba ho an’ny mpanjifanay rehetra eran’ny Madagasikara iray manontolo.
www.lakroa.mg- Ary ahoana ny fanehoana ny fetim-pirenena ato anatin’ny orinasa ? Misy fanolorana zavatra ho an’ny mpiasa (gisa…) ? Mpiasa rehetra ve sa ho an’ny manana zanaka ihany (fanomezana arendrina) ?
LR- Mandray anjara amin’ny lafiny sosialy matetika ny orinasa La Gastronomie Pizza : fanolorana mari-pankasitrahana ho an’ireo mpiasa mendrika, fizarana fitaovam-pianarana ho an’ny zanaky ny mpiasa, fizarana "panier de Noel et Nouvel An" ho an’ny mpiasa sy ny zanaky ny mpiasa, fandefasana hiala sasatra any ivelany ireo mpiasa mendrika izany. Tsy voatery amin’ny Fetim-pirenena tahaka izao fotsiny fa amin’ny fotoan-dehibe rehetra izay tokony hanaovana izany
www.lakroa.mg- Ny Gastronomie Pizza ve manohana ny tanora malagasy ? Raha eny dia toa inona no endrika raisin’izany ? Manampy amin’ny fananganana orinasa ve ?
LR- Manohana ara-kevitra sy mizara traikefa mandavan-taona izahay. Mandray ireo fitsidihana orinasa ataon’ny tanora mpianatra maro na aty amin’ny ambaratonga ambany na ny eny amin’ny anjerimanontolo ny La Gastronomie Pizza. Mijanona eo amin’ izay fanohanana ara-kevitra izay anefa izy fa tsy miditra amin’ny fanohanana ara -bola na ara -pitaovana akory eo amin’ny fanganana orinasa izay andraikitry ny toerana na orinasa mpampindram-bola.
Misy sary afaka ahitana io voalaza eo ambony io ao amin’ny pejy ofisialy facebook La Gastronomie Pizza.
www.lakroa.mg- Mankasitraka amin’ny fandraisana tompoko.
LR- Ianareo no isaorana ary dia mirary Asaramanitra ho feno fifaliana ary hanehoana fitiavan-tanindrazana tokoa izahay ato amin’ny orinasa.